အားကျစရာအချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ k cele စုံတွဲဆယ်တွဲအကြောင်း | News Bar Myanmar
အားကျစရာအချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ k cele စုံတွဲဆယ်တွဲအကြောင်း
1.Rain နဲ့ Kim Tae Hee
ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ အကြာကြီးလက်တွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ kpop ဘုရင် Rain နဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသမီး Kim Taehee တို့စုံတွဲကတော့ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
2.Jung Kyungho နဲ့ Girls’ Generation Soo Young
မင်းသားချော Jung Kyungho နဲ့ အဆိုတော်မင်းသမီးချောလေး Sooyoung တို့စုံတွဲကတော့ တွဲလာတာ ခုနစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲပံ့ပိုးပေးတဲ့အပြင် လက်ဆောင်တွေပေး စျေးဝယ်တွေထွက်နဲ့ အားကျစရာပါ။
3. Hyuna နဲ့ E’dawn
ကေပေါ့ပ်လောကကို အကြီးအကျယ်ဂရက်ထသွားစေတဲ့ဒီစုံတွဲကတော့ ရွှေလက်တွဲလာတဲ့ လေးနှစ်တာမှာတစ်ခါမှ ရန်မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား ချစ်ကြည်နူးနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလဲ လူမှုကွန်ယက်မှာ အမြဲမျှဝေတတ်ပါသေးတယ်။
4. Taeyang နဲ့ Min Hyo Rin
အချိန်အကြာကြီးတွဲပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ။ Taeyang ရဲ့နာမည်ကျော်သီချင်းဖြစ်တဲ့ Eyes, Nose, Lips သီချင်းဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို ရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေသိရပြီးနောက်မှာတော့ အားမကျပဲမနေနိုင်တော့ပါဘူး။
5. Jo Jung Suk နဲ့ Gummy
မင်းသားချော Jo Jung Suk နဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်တေးတွေကိုသီဆိုတဲ့ အဆိုတော်မလေး Gummy တို့ စုံတွဲကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း ငါးနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာ ပထမဆုံးရင်သွေးလေးလဲရရှိတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။
6. Ji Sung နဲ့ Lee Bo Young
ချစ်သူသက်တမ်း ၇ နှစ်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုဆိုလက်တွဲလာတာ ၁၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ မိသားစုဘဝထူထောင်ထားပြီး Ji Sung ဟာ ဇနီးနဲ့ကလေးတွေအတွက် အရက်တောင်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
7. Sean နဲ့ Jung Hye Sung
၂၀၀၄ ခုနှစ်တည်းက လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သားသမီးလေးယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ မိသားစုဘဝမှာ အောင်မြင်ရုံသာမက နှစ်ယောက်လုံးဘအလှူအတန်းလဲရက်ရောလွန်းတာမို့ ပြည်သူတွေက နတ်သမီးနဲ့နတ်သားလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
8. Haha နဲ့ Byul
Running Man မိသားစုဝင် Haha နဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးချောအဆိုတော် Byul တို့ကတော့ စိတ်တူကိုယ်ဆူစုံတွဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကာ သားသမီးသုံးယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးထူထောင်ထားပါတယ်။
9. Won Bin နဲ့ Lee Na Young
မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ထယ်ဆောက်လို့သိကြတဲ့ မင်းသား Won Bin ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ Lee Na Young နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သားလေးတစ်ဦးနဲ့ ဒေါ်လာ ၆ သန်းတန်တဲ့အိမ်ကြီးမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေကြပါတယ်။
10. Ki Tae Young နဲ့ Eugene
Kpop ရဲ့အစပထမ SES အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖြစ်လဲ မင်းသမီး Eugene နဲ့ မင်းသား Ki Tae Young တို့ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီး သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ TV အစီအစဉ်တွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ သိသာပါတယ်။
Next ရုံတင်ပြသတော့မယ့် Park Shin Hye နဲ့ Yoo Ah In ရဲ့ zombie ရုပ်ရှင်သစ်အကြောင်း »
Previous « Marvel Studios မှ ရိုက်ကူးမည့် The Eternals ဆိုသည့် ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်သွားမည့် Ma Dong Seok